I-FMovies New Website 2020 - Singawabuka Ama-Movie Kule? - Ezokuzijabulisa
I-FMovies ngokuyisisekelo iwebhusayithi evumela abasebenzisi bayo bukela izinkulungwane zama-movie ahlukene ezitholakala kungxenyekazi yazo mahhala ngokuphelele. Le webhusayithi iye yathandwa kakhulu esikhathini esifushane kakhulu ngoba baneqoqo elikhulu lama-movie abazonikeza ngisho nemidlalo ye-TV iningi lethu sonke elifuna ukuyibuka. Kulula kakhulu nokusebenzisa le webhusayithi.
Ungavele uvakashele le webhusayithi bese uyisebenzisa ngokuthola ama-movie ngokuwafuna noma ngokuthola amagama wama-movie noma Imibukiso ye-TV lokho kubaliwe.
Ngabe kusemthethweni ukusebenzisa i-FMovies?
Ngempela lo ngumbuzo onzima kakhulu ukuwuphendula njengoba umthetho wehlukile kuwo wonke amazwe. I-FMovies ibe nezinkinga eziningi e-US ngezinto ezifana nokwephulwa kwelungelo lobunikazi, kanye nokukhangisa okungelona iqiniso okwenze inkinga enkulu kubaphathi bewebhusayithi kanye nethimba layo eliphethe iwebhusayithi. Ngenxa yalokhu, bekufanele iguqule izizinda zayo kuphela ukuze iphile kuleli zwe le-inthanethi.
Njenge Abathandwa le webhusayithi iqhubeka nokushintsha isizinda sayo njalo. Uma use-US futhi usebenzisa le webhusayithi ukubuka noma ukulanda noma yimaphi ama-movie, kungahle kube yinkinga enkulu kuwe ngelinye ilanga. Kuneminye imithetho eminingi exhunyaniswe nale webhusayithi kwamanye amazwe. Ngakho-ke, empeleni kungcono kuwe ukuthi ugweme ukuvakashela le webhusayithi.
Ngabe iwebhusayithi i-FMovies iphephile?
Lo ngumbuzo obucayi kakhulu. Kungenzeka ucabanga ukuthi usebenzisa lokhu kuphela iwebhusayithi yokusakaza ama-movie nemibukiso ye-TV, akunjalo? Ukuthembeka, kunabasebenzisi abaningi abazamile ukuvakashela le webhusayithi ukuze babheke ukuthi isebenza kanjani. Noma nini lapho bezama ukubukela noma iyiphi i-movie, yayihlala ivula iwindi elisha noma iveze i-pop up ibacela ukuthi bachofoze kusixhumanisi esithile.
Leli iqhinga lokukudukisa. Uma uchofoza izixhumanisi ezinikezwa yiwebhusayithi, abakwaFMovies bazolanda i-malware kwikhompyutha yakho engalimaza iPC yakho.I-FMovies ayiyona iwebhusayithi ephephile ongayisebenzisa.
Yini ongayenza uma usebenzise i-FMovies?
Uma ungakaqapheli noma ikuphi ukuziphatha okungajwayelekile kwi-Mac yakho noma kwi-PC ye-Windows njengoba usebenzise i-FMovies, kungenzeka ukuthi akukaze kulimale okwamanje. Kepha, lokho akusho ukuthi kusamele uvakashele le webhusayithi. Kusobala ukuthi kufanele uyigweme ukuyisebenzisa ngoba izokukhohlisa ekuchofozeni izixhumanisi ezingalimaza ikhompyutha yakho, bese lokho kuzokwenza kube nzima kuwe ukwenza noma yini kwi-PC yakho.
Into engcono ongayenza, kufanele uskene i-PC yakho nganoma iyiphi i-malware. Okungenani uzokwazi ukuthi ngabe kube khona okubi kwi-PC yakho.Ungasebenzisa i-antivirus ukuskena iMac noma iPC yakho. Kukhona isoftware eningi yama-antivirus etholakala kuwo womabili amapulatifomu ongawalanda mahhala futhi azoskena ikhompyutha yakho ngaphandle kwezindleko.
Ingabe kufanele usebenzise ama-FMovies?
Lokho kukuwe ngokuphelele ukuthi unqume ukuthi kufanele uyisebenzise le webhusayithi noma cha. Ukukhuluma iqiniso, kubonakala sengathi i-FMovies ine-malware futhi ingahle ibe yingozi kwikhompyutha yakho. Futhi, kubukeka sengathi inemithetho eminingana ye-copyright kwamanye amazwe, njalonjalo ngezikhathi ezijwayelekile, iyaqhubeka nokuhambisa izizinda. Uma uthatha isinqumo sokusebenzisa le webhusayithi, ngaphandle kwazo zonke izingqinamba, kufanele okungenani ungachofozi kunoma yisiphi isixhumanisi efasiteleni noma kuthebhu evulayo lapho uvakashela le webhusayithi.
Uma uvakashela le webhusayithi, kungabukeka sengathi iyiwebhusayithi esemthethweni yokusakaza. Kepha, akuyona into oyibonayo. Izikhathi eziningi kunezinsizakalo kuwebhu lapho uma ungakhokheli uhlobo oluthile lwezinsizakalo, abahlinzeki bazobheka indlela yokuthola imali kuwe ngezinye zezinye izindlela. Kungenzeka ngokuhambisa izikhangiso noma ukulanda uhlobo oluthile lwe-malware kwikhompyutha yakho. Futhi lokhu kubonakala kuyindaba yangempela nge-FMovies.
Ukubuka noma ukulanda ama-movie kumnandi ngokuphelele futhi uma uthola okufanayo mahhala ngokuphelele kuzokukwenza, futhi ujabule kakhudlwana njengoba bekungafanele ukhokhe ngisho isenti elilodwa. Kepha, ubucabanga ukuthi kuzokwenzekani uma usebenzisa le webhusayithi noma amanye amawebhusayithi anikeza abasebenzisi bawo ama-movie wamahhala? Yini abayitholayo empeleni futhi kungani behlinzeka ngama-movie mahhala? Kungaba ngama-movie amadala noma ama-movie akamuva.
Baneqoqo lakho konke. Ngakho-ke, impendulo yombuzo wokuthi batholani ngokunikeza ama-movie amahhala ukuthi - amawebhusayithi anjalo athola ngezikhangiso futhi nange-malware i-PC yakho engayithola ngokubuka noma ukulanda ama-movie kulawo mawebhusayithi. Ungaze ucabange kwesinye isikhathi ukuthi kulungile ukuvakashela kanye noma kabili ngoba lokho ngeke kukulimaze kakhulu. Kepha, udinga ukwazi ukuthi akukukhombisi njalo ukuthi yini engayenza kwikhompyutha yakho.
Uma usenquma ukuvakashela amawebhusayithi anjalo, kuhlala kungcono ukusebenzisa i- I-VPN kanye nesoftware yokulwa namagciwane ukuze ususe noma iyiphi i-malware noma igciwane elitholakele kwikhompyutha yakho futhi ugcine engqondweni yakho ukuthi akufanele uxhumanise kunoma yiziphi izixhumanisi ezinikezwa yile webhusayithi. Kungenzeka kwesinye isikhathi ukuthi le webhusayithi ikutshele ukuthi i-adobe flash player yakho noma isoftware yakho isiphelelwe isikhathi.
Ngakho-ke, uzodinga ukuyivuselela ukuze ufinyelele kule webhusayithi nakwamanye amawebhusayithi futhi. UNGAKWENZI LOKHO. Kungcono ngaso sonke isikhathi ukuhlola ikhompyutha yakho nganoma yiziphi izingqinamba ezihlobene nesoftware futhi uma ingezakamuva manje ungayibuyekeza nganoma yisiphi isikhathi usebenzisa umthombo oyinhloko kunokuthola kweminye imithombo okuyimbumbulu ngokuphelele. Siyethemba manje usuyazi ngale webhusayithi nokuthi isebenza kanjani.
Ungase futhi uthande: